Ingabe Ngempela uku-1% we-LinkedIn? | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 11, 2013 NgeSonto, uJanuwari 15, 2017 Douglas Karr
Izinombolo. Kwesinye isikhathi bangiqhubela amantongomane ngokuphelele. Namuhla isibonelo esihle. I-LinkedIn ikhiphe i-imeyili ihalalisela amalungu ayo abesezingxenyeni eziphezulu zamaphrofayili abukwa. Nansi ukhiye… amaphrofayili abukiwe. Nakhu ukuthi i-imeyili ibukeka kanjani… izincomo zomngani uDaren Tomey:
UDaren ishaja enzima futhi ngokuphelele kwiklabhu yami ye-1% yabaphathi bokuthengisa ezweni lonke. Ngeke ngikususe kuye lokho. Umbuzo uthi kungani iphrofayili kaDaren ingaba ngomunye wababukwa phezulu? Futhi ungangena kanjani kwiklabhu le-1%?
Ingxenye yesibalo ilula, enye ingxenye inzima.
Okokuqala, uDaren uphethe ukuthengisa kumaZmags - an ipulatifomu yokushicilela yedijithali (kanye neklayenti). Ukuthengisa kunesihluku. Imali engenayo iphezulu futhi izinkampani zihlala njalo looking yethalente. Ukhiye lapha looking. Ukubheka = ukubukwa. Ngakho-ke, beka ukuphathwa kwezentengiso noma umphathi wokuthengisa kuphrofayela yakho futhi uzokhuphuka. Ngaphakathi kwenethiwekhi yami, iningi lamaphesenti aphezulu abesezithengisweni.
Okwesibili, sebenza kanzima ekuxhumeni ku-LinkedIn. UDaren wazi cishe wonke umuntu ezweni kusuka kuzo zonke izinkampani ezinkulu. Ungumxhumanisi wenethiwekhi omangalisayo futhi unethoni yobudlelwano. Uhlonishwa kakhulu embonini yesoftware nobuchwepheshe nokuthi obani abaholi bezentengiso. I- ukuxhumana okuningi, aba ngcono amathuba okuba kubhekwe iphrofayela yakhe.
U-Buzzfeed wenze umsebenzi omuhle we kwehlukaniswa izinombolo futhi sigxeke ngokufanele ukwabelana okulandelayo okwenzeke kuwebhu yezenhlalo. Lo mkhankaso wawuyi-shill… waxhaphaza abantu ukuthi babelane ngomkhiqizo we-LinkedIn - okusobala kakhulu kwezokuxhumana eziphumayo.
Lolu uhlobo lomkhankaso olungishayela amantongomane. Iphesenti liyinombolo engenangqondo engasho lutho… lutho ngempela. Uma uyinkanyezi emkhakheni wakho okhetha ukuthi uxhumeka nobani ku-LinkedIn, awutholanga neyodwa yalezi imeyili. Kepha uma usembonini yokuqashwa okunzima ngenethiwekhi enkulu… futhi ungumuntu othanda umsebenzi wakho… usathola enye yalezi imeyili.
Idumela lilahliwe, izincomo zilahliwe… vele utshele umuntu ukuthi zikhethekile ukuze zikwabelane ngakho. Futhi kusebenze ngokungenaphutha.
Ungikhumbuza esinye sezikibha zami: Ukhethekile. Njengawo wonke umuntu.
Tags: IgunyaLinkedIni-imeyili exhumanisiweamagoli
I-Ebook: Kuyini ukumaketha kwe-Lifecycle?
Feb 11, 2013 ngo-5: 49 PM
UDoug ucezu oluhle futhi uvusa imicabango nokho ngenkathi lo mkhankaso uyi-shill - lokho kuhlose ngakho ukwenza abantu bakule 1% noma u-5% noma u-10% bacabange ngakho - i-hmmm Kusobala ukuthi iyathandeka kakhulu kunalokho ebengikucabanga - mhlawumbe ngifuna ukwazi ukuthi ngubani ubheke iphrofayili yami? Futhi ngo- $ 16 kuphela (noma ngaphezulu) - ngingathola.
Yiba nentshisekelo yokwazi ukuthi bangaki ababhalisele ama-premium 🙂
Feb 11, 2013 ngo-11: 19 PM
Umbuzo omuhle, Duncan!
Feb 11, 2013 ngo-6: 07 PM
Siyabonga ngokungena kulokhu. U-5% wami ubusolisa. Ngisebenza ngokungathathi hlangothi, kepha anganele ukuthi ngigunyaze ukuba phezulu phezulu. UDuncan unephuzu elihle ngezansi - ngiyazibuza ukuthi mangaki amaprimiyamu athengiswa ngenxa yalokho?
Feb 11, 2013 ngo-6: 36 PM
Into ekhaliphile ngayo? Bengingazi lutho ngayo ngize ngiyifunde lapha iDoug - shill noma cha, iyasebenza.
Feb 12, 2013 ngo-12: 18 PM
Feb 12, 2013 ngo-12: 43 PM
Nginayo namuhla futhi. Ngicabanga ukuthi ukufakwa ohlwini eduze kokuthunyelwa komsebenzi kuyasiza futhi.
Feb 12, 2013 ngo-11: 20 AM
UDouglas, okuthunyelwe okuhle. Lapho nje ngithola u-5%, ngacabanga ukuthi “ngingomunye ku-10M… angikhethekile kangako.) Ngivumile ukuwabelana ngawo ku-LinkedIn (kuphela); kepha angizange ngiyikhokhele insizakalo ye-premium ukuthola eminye imininingwane. Mhlawumbe kufanele usebenzise lesi sigaba sokuphawula ukubona ukuthi yikuphi okunye ukusabela abantu abanakho…
Feb 12, 2013 ngo-12: 48 PM
Yamukela ngokuphelele imibono yokuthi umkhankaso uphumelele noma cha. Ukuqagela kwami ​​ukuthi, ngoba kuyilutha futhi ushintshe imiyalezo yesitayela, ayenzanga kahle. Noma ithole ukunakwa.
Feb 12, 2013 ngo-11: 23 AM
Imicabango yami ncamashi. Ngizwile ukuthi ngisho namaphoyisa asebenze inqubo "yomphathi omuhle, iphoyisa elibi" ngesikhathi sezingxoxo nawo aziwela ngokwawo. Kwakunjalo nami nesikolo sami esingu-5% esivela ku-LinkedIn. Noma bengazi ukuthi kuyisimiso esingenakulinganiswa (angikutholi * lokho * ukubukwa okuningi) ngandlela thile ngazizwa ngiphoqelekile ukuthumela i-tweet ngakho! Ngazithiba.
Feb 12, 2013 ngo-4: 49 PM
Ngisebenza kahle ku-LinkedIn futhi ngizimisele ngokukhulisa inethiwekhi yami. Ngicabanga ukuthi imininingwane iyaqondakala futhi umkhankaso wokumaketha unobuhlakani. Ngifisa sengathi ngabe ngacabanga ngakho. UDoug, unengilazi ukubukwa okungenalutho kulokhu. Kungukudla okuhle nje komcabango… 1%, 5% noma 10% wezigidi ezingama-200 ngamaqembu amakhulu okufanele ahlanganiswe, yebo. Kodwa-ke, imininingwane eyamukelekile. Ngisenzile isimemezelo sami ku-tweet… Bengicabanga ukuthi kuhle. Futhi njengomthandi wokukhangisa nokuthengisa, ngijabule kakhulu nokuba yingxenye yanoma isiphi isinyathelo sokukhangisa noma sokuthengisa esisha (futhi esithandekayo). Futhi iqiniso liyatshelwa, mhlawumbe ngithumele izinto ezimbalwa ezingathandeki ngaphambili. Ingxoxo oyiqalisile ngalokhu ukumaketha okunamandla kakhulu okususelwe esimemezelweni sakamuva se-LinkedIn kumaphrofayli abukwa kakhulu. Ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi udlala esandleni sabo.
Ngiyawazisa umbono wakho noma kunjalo, kuhle ngaso sonke isikhathi ukubona izinto ngombono womunye umuntu. Siyabonga ngokuqala le ngxoxo!
Feb 13, 2013 ngo-3: 13 AM
Okuthunyelwe okuhle. Ngithole i-imeyili engazisa ukuthi ngangiphakathi kuka-5% futhi ngamangala - la maphuzu ayehambisana nengangikucabanga. Yize ngikuqonda ukumaketha ngemuva kwakho, iqiniso leqiniso ukuthi ukwethembeka kubaluleke kakhulu kunokuzama ukwenza umsebenzisi azizwe efudumele futhi ethambile ngaphakathi.
Feb 14, 2013 ngo-6: 13 PM
Hhawu, Doug! Bengizizwa ngikhethekile nje ngami.
Feb 14, 2013 ngo-6: 23 PM
@ facebook-1728428996: disqus Usabalulekile Mike! Njengawo wonke umuntu 🙂
Feb 18, 2013 ngo-7: 16 PM
Wena (nami) asikho phakathi kwe-1% ephezulu yamalungu e-LinkedIn.
Ukumaphrofayli abukwa kakhulu ku-1% phakathi kwamalungu, amaphrofayli ayimpinda, abantu abake bangena kanye bakhohlwa ngakho, abantu abashonile, abakhohlisi, abakhohlisi nabagaxekile.
Kepha, sonke siyize ngakho sabelana ngakho. Kuhle ngathi!
Feb 20, 2013 ngo-1: 41 PM
Thanda isikibha. Ifingqa ngempela imithombo yezokuxhumana ngo-2013.